Man United oo wada hadal heshiis Kordhin ah la fureysa Jose Mourinho
Sunday, May 27th, 2018 - 12:36:30
Saturday September 09, 2017 - 10:51:53 in Wararka by Kubad Bile
Manchester United ayaa diyaarineeyso qandaraaska u kordhisaa macalinkeeda Jose Mourinho kadib markii uu Premier League xilli ciyaareedkaan uu ku biloowday si wanaagsan warkaana ayaa waxaa qoreeyso majalada Telegraph .
Kooxda shayaadiinta cascas ayaa kaalinta koowaad ku jirto xilli ciyaareedkaan kadib markii ay adkaatay 3-dii kulan ee ugu horeeysay waxaana ay hada bilooween inay Jose kala hadlaan heshiish kordhintiisa Manchester United waloow ay taas si toos ah u dhici doonto bisha November sida uu qorshaha yahay.
Hadii ay noqotaa in Jose Mourinho uu sii joogaa xilli ciyaareedka dambe waxaa uu noqon doonaa macalinkii ugu cimriga dheeraa Manchester United tan iyo markii uu xiliika ka tagay macalin Sir Alex Ferguson oo 2013-kii ciyaaraha iskaga fariistay. David Moyes ayaa kaliyah 9 bilood joogay Kooxda, Louis van Gaal kaas Kooxda joogay labo xilli ciyaareed waxaana 2016-kii lagu badalay Mourinho.
Jose ayaa ah macalin aan saldhigan Koox asiga oo aan waligiis joogin wax badan 3 xilli ciyaareed koox. Jose ayaa looga fadhiyaa inuu xilli ciyaareedkaan keenaa Kooxda koob sida EPL oo kale ah ugu yaraan waloow uu xilli ciyaareedkii hore ku guuleestay 3 Koob.